Shandong Hengrong Packaging Products Co., Ltd. dia orinasa lehibe manambatra ny famokarana, ny fampandrosoana ary ny varotra ary manampahaizana manokana amin'ny famokarana vokatra lehibe toy ny kitapo FIBC, kitapo tenona, kitapo Bopp, kitapo harato, harona taratasy ary kitapo ahidratsy izay be mpampiasa amin'ny indostrialy, mineraly & fambolena indostria, fonosana vokatra, fitaterana, trano fanatobiana entana ary logistika.
Ny orinasanay dia manasongadina ireo fitaovana sy teknika manara-penitra ao an-trano sy any ivelany ary ny vokatra rehetra dia vita amin'ny 100% -n'ny fitaovana virjina. Ny milina fanaovana sary tariby dia afaka mamokatra tariby miloko sy matevina isan-karazany miaraka amin'ny tanjaka avo, fananana fanitarana miavaka, fanoherana UV sy oksidana tena tsara, izay afaka mamaly ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny fampiasana miverimberina.
Ny milina fanenomana dia afaka mamokatra lamba voatenona 25-500cm amin'ny velarana fisaka, avo lenta, tanjaka avo lenta ary fiainana maharitra, izay afaka manapaka ny vidin'ny lojika sy ny asa ho an'ny mpanjifa. Miaraka amina teknika mandroso, ny milina manarona dia afaka mamokatra lamba mifono mifafy sy mateza, miaraka amin'ny androm-piainana maharitra sy ny voka-dratsin'ny vovoka / lena mando. Miaraka amina teknika faran'izay mahavariana, ny milina fanjairana dia afaka mamokatra karazana tubes FIBC, U type FIBC, baffle sac, kitapo misy rivotra ary kitapo miendrika tsy ara-dalàna, kitapo leno harato, izay samy manana ny endriny mirindra, ny fisehoana manintona ary ny fahombiazan'ny vidiny lafo. Miaraka amin'ny fahaizana mampihatra famokarana maridrefy, ny orinasanay dia afaka manatitra haingana ireo vokatra mifototra amin'ny fifandraisana akaiky eo amin'ireo fomba fiasa hatramin'ny fandraisana ka hatramin'ny fandefasana.
Nametraka rafitra fitantanana kalitao feno izahay, izay hifehezana ny kalitao henjana sy fitiliana amin'ny fomba tsirairay ho an'ny vokatra rehetra manomboka amin'ny fidiran'ny fitaovana ka hatramin'ny fandefasana vokatra vita, ary ny 100% ny vokatra vita dia tokony hosedraina sy diovina mba hahazoana antoka fa fisehoana madio sy madio.
Miaraka amin'ny ekipa mpamorona matihanina dia afaka manome fonosana azo ampiharina isan-karazany sy vahaolana amin'ny pirinty mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa isan-karazany izahay, ary nanolotra karazana drafitra maherin'ny 1.000 ho an'ny mpanjifanay avy any Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Aostralia, Eoropa ary Azia. Namboarina tsara sy novokarina tamin'ny fomba miavaka, ny vokatray dia nampidina be ny vidin'ny fividianana ny mpanjifanay ary ankafizin'ny mpanjifanay manerana an'izao tontolo izao.
Miaraka amin'ny lamina varotra malefaka sy maro karazana, ny orinasanay dia afaka manome serivisy ODM sy OEM. Raisinay amin'ny fo manontolo ny mpanjifa taloha sy vaovao manerana an'izao tontolo izao ho an'ny orinasanay amin'ny fifampiraharahana sy fiaraha-miasa. Ary koa, hanao izay fara herinay izahay hanome ny mpanjifanay vokatra sy serivisy avo lenta!